सबै भन्दा राम्रो शैम्पूहरू के हुन्? केवल पेशेवर | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
म लोरेल पोन्राबाट केराटासे हुँ, म्याट्रिक्समा चिल्लो कपालको लागि श्रृ orange्खला (सुन्तला) छ - त्यहाँ शैम्पू र एक मास्क थियो, धेरै राम्रो छ।
टार साबुन, जुँगा र म्यान्डभोक्स नष्ट हुनेछ, र माटो धोइनेछ।
व्यावसायिक शैम्पू, पेशेवर कपाल मास्क ... कसरी ती अव्यावसायिक भन्दा फरक छन्? के यो कुनै पनि उत्पादनलाई ru०० मिलि प्रोफेशनलको लागि २०० रूबल भन्दा बढी महँगो भन्न सकिन्छ वा यो अझै मूल्य मात्र होइन तर गुणस्तर पनि हो?
पेशेवर कपाल र स्टाइलिस्टका अनुसार ती सबै कपाल शैम्पूहरू जसलाई प्रोफेशनल शैम्पूको लेबल लगाइदैन र जुन साधारण स्टोरहरूमा बेचिन्छ, र पेशेवर हेयरड्रेसरहरूको लागि विशेष सैलुनमा बिक्री गर्दैन, केवल कपालबाट फोहोर र धेरै बोसो हटाउने एक मात्र माध्यम हो। हो, यी सबै व्यवसायिक शैम्पूहरू सबै सुपरमार्केटको घरेलु रसायन खण्डमा बेचिन्छ, ब्राण्डद्वारा लेबलमा गरिएको प्रतिज्ञाहरू अनुसार मूल्यमा भिन्न हुन्छन्, तर सामान्यतया तिनीहरूको कपाल सफा र नरम बनाउनको लागि एक साझा विशेषता हुन्छ।
यदि तपाइँ स्वभाव अनुसार राम्रो कपाल छ, तब यो तपाइँलाई चाहिने हो। तर यदि त्यहाँ कुनै समस्याहरू छन्, उदाहरणका लागि, डन्ड्रफ, स्प्लिट समाप्त, सुख्खा खोपडी वा कपाल झर्ने, तब केवल पेशेवर कपालको सौन्दर्य सामग्रीले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। निस्सन्देह, साधारण शैम्पूहरूका लेबलहरूमा उनीहरू यो पनि लेख्छन् कि तिनीहरू एकदम प्रभावकारी छन् र कहिलेकाँही उनीहरू साँच्चिकै सहयोग गर्दछन्। तर यदि कपालको रोग अलि बढी गम्भीर छ भने, त्यसपछि व्यावसायिक सहायता पर्याप्त छैन।
व्यावसायिक शैम्पू र पेशेवर हेयर मास्कमा अधिक स्पष्ट गुणहरू छन्। त्यस्ता उत्पादनहरू वास्तवमा कपालको समस्याहरू समाधान गर्न डिजाइन गरिएको हो, र तिनीहरूलाई नुहाउन र नरमता सिर्जना गर्न मात्र होइन। प्रोफेशनल शैम्पूहरू विभिन्न प्रकारका कपाल प्रकारका लागि सिर्जना गरिन्छ: सामान्य, तेल, संयोजन कपाल, सुक्खा, पातलो र सुस्तको लागि, अनुचित हेरचाह वा वातावरणद्वारा बिग्रेका लागि, रyed्ग, ब्लीच वा हाइलाइट गरिएको, घुमाउरो कपालको लागि, सीधा कपालको लागि, लहराती, घुमाउरो। , लामो र छोटो, उमेरका व्यक्ति र बच्चाहरूका लागि, ड्यान्ड्रफ शैम्पूहरू, विशेष गरी गोरेज, ब्रुनेट्सको लागि, उज्यालो रंगमा रyed्दा कपालको लागि। यी कुनै पनि प्रकारको विशेष हेरचाह आवश्यक पर्दछ। प्रायः साधारण घरको शैम्पू उत्पादन गर्नेहरूले कार्यको फराकिलो स्पेक्ट्रमको साथ उत्पादहरू बनाउँछन्, जसका कारण एक उपकरणले धेरै ठूलो दर्शकहरूलाई मिल्छ, जबकि पेशेवर शैम्पूहरू व्यक्तिगत रूपमा कपालको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राखिन्छ।
व्यावसायिक शैम्पू र कपाल मास्क, पेशेवर कपाल रye, blondoran, कपाल स्प्रे खरीद, भौं रye।
मेरो लागि, पेशेवर शैम्पू गैर-पेशेवर भन्दा धेरै नराम्रा लाग्यो।
कति टिप्पणी .. र सबै मामला छैन।
लन्डा प्रो मा खराब शैम्पू हैन (विशेष गरी रyedको कपालका लागि एक) ... बोतलहरुमा १००० मिलीलीटर छन्। मूल्य धेरै सस्तो छ।
डिक्सन (इटाली), Kanebo (जापान) राम्रो छन्।
यदि सामग्री सम्भावना सीमित छैन भने फेक्के र अर्को सूचीमा। नियमको रूपमा उच्च मूल्य, यस क्षेत्रमा उच्च गुणस्तर।
Schwarzkopf प्रो। , इण्डोला, Barex। व्यर्थमा फालिएको पैसा।
उत्तम शैम्पू र कपाल हेरचाह उत्पादनहरु। यसले तपाईंलाई कुनै पनि पेशेवरहरू बताउनेछ
जसरी इजरायलको एक कपालले मलाई हिजो भन्योः तपाईं रूसीहरू कुनै कुराको मोल गर्नुहुन्न! तपाईंसँग शैम्पू क्लिन लाइनको उत्कृष्ट श्रृंखला छ! सबै कुरा ठोस रसायन हो
यो कडाईका साथ व्यक्तिगत छ।
पोस्ट कपाल को हेरविचार
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,298 प्रश्नहरू।